AKHRISO: Liiska Xildhibaannada cusub ee Galmudug oo la shaaciyay + (Magacyada) | HalQaran.com
AKHRISO: Liiska Xildhibaannada cusub ee Galmudug oo la shaaciyay + (Magacyada)
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Guddiga Farsamada ee dhismaha Galmudug ayaa Jimcihii maanta soo bandhigay liis ay ku qoraan magacyada saddex iyo sideetan xubnood, oo ka mid noqonaya Baarlamaanka Galmudug.
Guddiga Farsamada ayaa xilliyada soo socda soo bandhigi doono lix xubnood oo keliya oo ka harsan Baarlamaanka Galmudug, oo tiradoodu guud ay tahay sagaal iyo sideetan xubnood.
Liiskan ay maanta soo bandhigeen Guddiga Farsamada ayaa waxaa ku jira labaatankii xubnood ee Ahlu Sunada Galmudug saami ahaanta looga siiyay Baarlamaanka Galmudug.
Cabdinaasir Geelle Cilmi, guddoomiyaha guddiga Farsamada ayaa Warbaahinta u akhriyay magacyada xubnaha la sheegay inay Odayaasha Dhaqanka u soo xuleen inay ka mid noqdaan Baarlamaanka 2aad ee Galmudug.
Odayaasha Dhaqanka ee beelaha Galmudug oo qaarkood saluugsan wadada loo maray soo xulista Xildhibaanada Baarlamaanka 2aad ee Galmudug ayaa kulamo ka wada Magaalada Dhuusamareeb.
Doorashada lagu wado inay ka qabsoomto Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug ayaa waxaa hareeyay khilaaf marba weji lahaa.
Liiska Xildhibaannada cusub ee Galmudug oo la shaaciyay
magacyada iyo qabiilada